Daawo Madaxweynaha Turkiga oo Hadal Qiiro badan Ka Jeediyey Xarunta Qaramada Midoobay Kuna Dhawaaqay In La Xidho Xaruntan ,Iyo Hadalkiisi oo Somaliya Burma Iyo Wadamo badan Ku Jiraan oo Af Somali ku turjuman
Sunday September 24, 2017 - 02:59:37 in WARARKII UGU DAMBEEYEY by Super Admin
MUXUU KU TILMAAMAY QARAMADA MIDOOBAY
"Shaqada UN-ka waa mid hoolgab ah. hadii indho aad leedihiin maad ku eegtaan dhibta ka socota Burma. maad eegtaan gumaadka ay geystaan diyaaradaha Droneska, Anigu wax kasta waan fahamsanahay lakin runta ayaan idin sheegayaa sidan socon meeyso”.
"Ciraaq, Burma, Afghanistan iyo dhamaan dhulalka islaamka waxa qasaya waa dalalka sheeganaya in dimuqraadiyad la isku maamulo. Reer galbeedka marka ay 2 kun halmar dilaan Qaramada Midoobay maalintaas ma shaqeeyso”
• MUSLIMIINTA BURMA
"waxaa nolasha lagu aasayaa dad islaam ah oo dalkooda jooga. 600 kun oo muslimiinta Rohinga ayaa u qaxay Bangaladesh oo aan u heynin meel ay dagaan iyo wax ay cabaan ama cunaan”.
"Wax eegaya ama wax ka hadlaya ma aragteen?, miyey taasi gumaad iyo xasuuq ahayn mise hogaamiyaasha islaamka waxa ay sameynayaan oo kaliya ayaa dambi ah”.
"Islaamka Burma waxa ay ku jiraan xaalad tii ugu darneed, sidaas ay tahayna Qoraal la xarxariiqay ayey Qaramada Midoobay uga hadlayaan. Ficil ma jiro sabab”
• HAL WADAN OO KALIYA
"Waxaan rabaa in aan idin cadeeyo in hal wadan oo kaliya amarkiisa ay halkaan ka socdaan, hadii Maya uu dhaho waa maya, hadii Haa uu dhahana waa Haa”.
"Aaway dimuqraadiyadii la sheegayay. Ogaada Turkey ma ahan wadan qaadan kara go’aamada halkaan lagu gaaro ee hal wadan uu dabada ka riixayo,”.
• MAREYKANKA IYO TRUMP
"Mareykanka maslaxdiisa aad buu uga fikiraa lakin tan wadamada islaamka kama fikiro ee inuu kor ka maamulo ayuu doonayaa, taasina ma ahan wax dimuqraadiyad ah”.
"Trump waad aragteen qudbadiisa ku aadaneed North Korea ee uu lahaa waan burburineeynaa Kuuriyada Waqooyi, oo aaway Qaramada Midoobay? halkee jireen marka xaruntooda dagaal lagu maleegayay?”.
"Yaase dagaal aan gali karin waqtigaan? xitaa wadan liita wuu u dagaalami karaa qadiyadiisa iyo dhulkiisa”.
• SANADKA DAMBE HALA XIRO HALKAAN
"Waxaan rajeynayaa in waxa aan ka hadlaayo la xaliyo. hadii taasi aysan dhicin fadlan hada inoo sheega halkaan sanadka dambe hala iska xiro”.
"Alle baan kaa shaneeynaa, inaga ayaa arimaheena isaga filan, cid cid u baahan ma jirto marka xaqiiqda laga hadlo”.
• HOGAAMIYAASHA ISLAAMKA
"Halkaan waxaa fadhiya hogaamiyaal islaam ah, waxaan doonayaa inaan qudbadaan uga faa’ideysto, War ogaada dal kale aayihiina kama shaqeynaayo ee idinka isku tashta”.
"Turkey wuxuu diyaar u yahay inuu difaaco wadan walba oo dhibaato lagu haayo tusaale ahaan islaamka Burma oo kale. Wallahi in aan ku shaqeyn doonin maskax kale iyo amar gadaal laga soo riixayo”..
Idiris Abdulkadir Mohamed